Ngo-December "YIT DOM" waqala wokwakha Primorsky esifundeni okuyinkimbinkimbi yokuhlala "Novoorlovsky" inkampani 2013th. Petersburg namuhla yakhiwe ngokuhambisana umqondo wokwakha eziyinkimbinkimbi kwezindlu, ngakho Onjiniyela ahlinzekwa emakethe ayisekho elilodwa Izakhiwo zokuhlala nendawo yonke omakhelwane. Omunye msebenzi kuyinto okuyinkimbinkimbi yokuhlala "Novoorlovsky". Itholakala eduze kwepaki eponymous, eduze Suzdal Lakes, futhi ngeke kuthathe ngempela endaweni umxhwele 46 amahektha.
LCD "Novoorlovsky" (Petersburg) enezinto eziningi izici ezithakazelisayo. Okokuqala, iphrojekthi Kuyathakazelisa ngoba Abadali salo "indodakazi" ithele of YIT inkampani ukwakhiwa Finnish - egatsheni Russian of "YIT DOM". Ngokuphathelene umqondo lathumela, abadali wakhetha isitayela neo-classic, futhi ngqo ukubonakala eziyinkimbinkimbi yakhelwe ku-Spanish Taller de Arquitectura Office.
Azungezwe elingaphandle eziyinkimbinkimbi iyokwakhiwa umbhoshongo endlini multi-storey, isikhala elingaphakathi kuthatha ezibanzi, imigwaqo yezimoto ivaliwe emgwaqeni nengqalasizinda, futhi 7 storey izakhiwo zezindlu uzobe elise ibhande phakathi. Wabathanda RC "Novoorlovsky" ikheli, ungase uhambe Suzdal onguthelawayeka bese ubheka izindawo lapho at izinombolo 1 no 12. Ngemva kwalokho, uma sebeqedile ukwakhiwa, wonke umzimba uzobe olunezinombolo.
Isakhiwo itholakala cishe ngaleso ophumayo komuzi, futhi Lower eChibini Suzdal kusukela emngceleni abaqashile uzokwazi ukuhamba imizuzu engaba yishumi. Life cishe ngo ubunjalo kuhlangene khona zonke izibusiso impucuko ngesimo evuthiwe kwengqalasizinda kanye kwezentengiselwano Primorsky esifundeni unjiniyela kwenziwe kube ezingaphezu kuka ezilingayo. Akufanele sikhohlwe izinga Finnish yokwakha, okuyilona elisebenzayo futhi plus eziqondile. Lapho kuyakuba khona zithengiswa mayelana ezindlini ayizinkulungwane eziyishumi.
LCD "Novoorlovsky": intuthuko yokwakhiwa
Njengoba kushiwo ngenhla, kwaqala umsebenzi ngo-2013. Kusolwa intuthuko kancane kancane ukwakhiwa. In parallel izindlu izokwakhiwa, nazo zonke izinto kwengqalasizinda kanye nezohwebo. Eyokuqala ihlanganisa ukwakhiwa zemibhoshongo eziyisithupha 25 phansi futhi ezine 7 storey izakhiwo kanye nezikole kanye izinkulisa (kulesigaba sihlelwe ukuba wasungula izikhungo ezintathu efana). Ngaphezu kwalokho, esitezi sokuqala uzonikezwa balahlwe commercial ingcebo, ngakho izakhamuzi izakhiwo ezintsha uzobe ngokushesha unikezwe zonke izinsiza ezidingekayo.
Ikhaya kuzobe kudayiswa ngezigaba. Isigaba sokuqala sihilela ukulethwa zakhiwo ezimbili ephezulu liphumele, lapho kukhona 444 amafulethi. Kuze kube manje, imigomo noma yikuphi ukubambezeleka ongabhalisiwe, umsebenzi yingcweti ngu 88%. Izinhloso uzobe wasungula ekupheleni 2016.
Ngokuphathelene kokuphela kwaqedwa wonke eziyinkimbinkimbi, kuba 2019.
Umthuthukisi uzama ukunikeza amakhasimende nebangomuso imininingwane egcwele ngentuthuko ukwakhiwa. Kuze kube yimanje, kanye ukuheha abathengi, inkampani uhlela uhambo kumasayithi lapho kukhona ukwakhiwa esendaweni ezakhiweni ezintsha. Phakathi ukuhlolwa lochwepheshe, bangagcini nje ngokuxoxa ngeprojecti, kodwa futhi ukuphendula noma imiphi imibuzo abathengi bakuthathe. Uhambo lingabhukwa ngokubiza +7 (812) 703-44-44. Amabhasi asuke ongaphansi komhlaba "Usigaxamabhande Prospect" futhi "Ozerki", isikhathi sokuhamba kuyadingeka ukuze ucacise uma ubhala.
wesifunda Primorsky ubhekwa izifunda elihle kunawo yenhloko-dolobha Northern. Azikho ukukhiqizwa yezimboni, kodwa ziningi ihlathi amapaki. Imigwaqo emikhulu elikhulu nazo sise ibanga elithileko kusuka eziyinkimbinkimbi, ukuze izakhamuzi yokuhlala eziyinkimbinkimbi "Novoorlovsky" akukho okuyovimba ukujabulela ukuthula futhi umoya ohlanzekile. Budebuduze naleli Lower Suzdal echibini, okuyinto Sekuyisikhathi eside kubhekwe a iholidi oluthandayo izakhamuzi eziningi, futhi inzuzo kubalulekile esivuna project.
LCD "Novoorlovsky" itholakala endaweni usumisiwe ingqalasizinda yayo, ngokuqondene abahlali bayo ngeke usakubona yisiphi isiphazamiso ukuhamba edolobheni. Budebuduze iziteshi ezimbili ongaphansi komhlaba - "Ozerki" futhi "Usigaxamabhande Prospect". Ukuze uthole kubo kungaba imizuzu nje eyishumi uma uhamba ngebhasi noma itekisi. Izinto zokuhamba zomphakathi ifakwe eduze izindlu. Njengoba abashayeli, zingenza kube ukusetshenziswa ezitaladini futhi imigwaqo Parachute Vyborg onguthelawayeka, ukuze uthole ngokushesha ukufika enkabeni yedolobha. Ibanga indandatho - hhayi amakhilomitha angaphezu kuka eziyishumi, okwenza uhambo eLeningrad esifundeni indawo ngokwanele ukhululekile futhi kufinyeleleke.
wesifunda Primorsky ine nezezimboni, ezenhlalo zokungcebeleka kakhulu. Izakhamuzi LCD "Novoorlovsky" ngeke siziswele amasevisi lezinto zalo. Eduze eziyinkimbinkimbi izitolo bangaki amancane esitolo omkhulu, kukhona amathilomu nezindawo zokudlela, amagatsha ambalwa amabhange ezinkulu, a salon ubuhle, eyomile yokuhlanza service.
Budebuduze LCD lenkundla "Primoretz" treadmills okuyinto abalandeli ungakwazi ukujabulela ezemidlalo yokuphila. Kufika izikole ezintathu kanye izinkulisa ezisebenza endaweni, kungaba emihlanu kuya kweyishumi imizuzu uhambo.
Ngaphezu kwalokho, njengoba kushiwo ngenhla, unjiniyela uhlose ukuhlinzeka bonke ezidingekayo bese abagibeli ngaphakathi eziyinkimbinkimbi. UZuma uya, eqinisweni, ukudala siqu mini-ingqalasizinda zabo, okuyinto kuyoba okuhloswe eyinhloko ekhemisi, esitolo, izikole ezimbili, izitolo ezinhlanu g / s, yokudlela kanye amathilomu eziningana. Umthuthukisi uhlose ukuqapha ngokucophelela inqubo liqashe neyohweba futhi ukuqasha kubo kuphela kulabo amabhizinisi sihlinzeke izinhlelo emphakathini.
Ngezansi Sizokwenza izimpikiswano ezimbili ezibaluleke kakhulu ezikhathaza abathengi ezingaba kule yokuhlala eziyinkimbinkimbi "Novoorlovsky": amanani kanye efulethini izakhiwo.
Apartments yokuhlala eziyinkimbinkimbi "Novoorlovsky" unjiniyela ibekwe njengoba ikilasi kwezindlu induduzo. Kule ndaba, abafisa ukuthenga studio zakhiwo engatholakali. It ahlinzekwa eyodwa, ezimbili, ezintathu futhi enamakamelo amane zokuhlala kuphela. endaweni yabo - kusuka 40 kuya kwangu-90 "izikwele."
Ngokuphathelene ukuhlela, ikhasimende uzothola nenala ukukhetha kusuka. Kungakhathaliseki ifomethi efulethini, unjiniyela inikeza inombolo ngokwanele elikhulu izakhiwo ngalunye oluphilayo. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuthenga inothi emithathu ruble, okuyinto ifakwe sauna. Noma 3 okulala efulethini enezindlu zokugeza ezimbili. Amakamelo okulala awabange uphiwa njengoba uhlelo European, ne ekhishini ehlanganisiwe egumbini lokuphumula, kanye zendabuko ezingaphezu okufushane yasekhaya, lapho wonke amakamelo ehlukene. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi hlobo of ezindlini, emakhishini ivulekile yonke indawo. kanye nezinhlobo amafulethi kungathengwa uma uthanda.
Zonke indawo yokuhlala anemisila balcony, okuyinto, ngezindinganiso Finnish, ezinkulu ukuze bakwazi kalula beka ifenisha ukuze baphumule. Ngaphezu kwalokho, zingabantu ngezinkomishi ezinamekwe ngomthofu.
Ngo ngayinye ezindlini kukhona isikhala konke igumbi sigqoka, yini more, bonke abanikazi amafulethi kuyodingeka ekuchithweni kwayo egumbini ithala ivulekile ngesikhathi.
Ceiling ukuphakama 2 m 70 cm.
Bacela izinhlobo ezimbili - eziyisisekelo futhi turnkey. Esimeni sesibili, wonke umsebenzi wenziwa kuphela ngemva bakubheka kubo nekhasimende. Okusho ukuthi, umnikazi ikusasa efulethini ekhethwe izinto yokuqedela kanye nomklamo egumbini, futhi emva kusungulwa indlu msebenzi ungenziwa Ukugubha Housewarming ngokoqobo zokuhlala ngosuku.
Kepha base ngombala, ikhasimende uzothola lapha: zonke Izinsiza ezidingekayo, egandayiwe endleleni ezifihliwe; amadivaysi metering; efakwe ethungatha umusi; konke okudingeka kokuxhuma ithelevishini, isimiso sezingcingo ne-Internet; iminyango yokungena insimbi; glazing kabili phezulu emafasiteleni; izindonga bushelelezi, phansi nophahla, uzilungiselele ngokugcwele for yokuqedela sokugcina. umninindlu Landelayo yezimanga bazilungisele umshini bebodwa noma ukusebenzisa Ochwepheshe. Ukuze uthole imali eyengeziwe, yebo.
Ngakho yini unjiniyela inikeza amakhasimende? Kuyini izindleko zokuhlala phakathi LCD "Novoorlovsky"? "YIT DOM" empahleni yabo amanani setha ngokuhambisana ekilasini kwempahla. Njengoba sekushiwo, isho ingxenye wenduduzo. Njengoba "Novoorlovsky" Ubufakazi obukhona kusukela abathengi ezindlini e ukubuyekezwa LCD, izindleko isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu ezindlini ngeke uqambe Nokho, le ndawo akuyona ezingabizi ukuze wonke umuntu.
Ngakho, ukuze "odnushku" kuyodingeka bakhokhe ruble 3.7 kuya ezigidini 4.2 I-"kopeck ucezu" - ezinhlanu kuya kwezigidi eziyisikhombisa, ezintathu endlini enamakamelo udonsa on 6400 000 000 000-7, futhi enamakamelo amane izobiza kwezigidi ezingu-11.
Yini uthi abahlali izindlu ohlongozwayo LCD "Novoorlovsky"? Njengoba for ekuhlobiseni nokuhlela, akukho enganelisekile. Nokho, izinga Finnish liyazikhulumela, inkampani "YIT" wazibonakalisa kakhulu emakethe impahla, ekhaya yalo ibe isikhathi ngaphandle zamehlo.
Abaningi, yebo, namazwana mayelana izindleko izindlu. Lapha, imicabango yabantu zihlukaniswe. Abanye baphikisa ngokuthi amanani ngokungenangqondo okusezingeni eliphezulu, kanti abanye bathi useyinto efulethini ekilasini induduzo, ukuze ukubaluleka elihambisana yabo. Nokho, izindlu namanje badayise, kanye nokuvakashela izindawo okukhulunywe ngazo ngenhla kulotshwe phezu inombolo ezanele izicelo.
Ayikho imibuzo kusuka kubantu ukuba ezokuthutha link. Zonke Yiqiniso, yamjabulisa khona eduze eziyinkimbinkimbi ezindaweni eziluhlaza kanye namachibi. Mayelana nengqalasizinda, abanye bakholelwa ukuthi namanje kusaqalwa bayoba miss, kufanele ulinde ukuze kuphelele ukwakhiwa, ukuzizwa ekhululekile. Kodwa lokhu, kodwa-ke, inhlupheko emisha, khetha indawo endlini, esemgwaqweni okuphambene umnyango esitolo omkhulu, kungenzeka kuphela emakethe yezindlu yesibili.
Futhi zonke ziyaneliswa kakhulu neqiniso lokuthi umthuthukisa ukunakwa kakhulu ukuba nokuphepha labahlali. Ngakho, eyinkimbinkimbi hhayi kuphela izofakwa yonke indawo ikhamera, kodwa futhi ifakwe CAT futhi ihlelwe esiteshini samaphoyisa esifundeni. Ngaphezu kwalokho, kucatshangwa ukuthi emigwaqweni eyinkimbinkimbi njalo uyoba isivikelo ligada okhokhelwayo.
What singasho ekugcineni? LCD "Novoorlovsky" - yindawo enhle silihlobanise njengoba inketho ukuthenga indawo. Nokho, ngeshwa lokhu okunikezwayo ngeke zonke ngenxa yezindleko kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu kwezindlu.
Residential eziyinkimbinkimbi "Ukubala zokuhlala" ku Gatchina lesifunda saseSt Petersburg: incazelo ingqalasizinda kanye nokubuyekeza
Ezezindlu kusuka kunjiniyela, "Morton", "ka Butovo Park 2"
I-squid: izakhiwo eziwusizo nezitsha ezidumile
Ihhashi esikhulu kunazo zonke emhlabeni - eBritish heavyweights Shire zohlobo
Isipho ibhokisi leyakhiwe ngemabhokisi ngezandla zakhe: isu elilula
HTC Desire 210 Dual Sim: ukubuyekezwa abanikazi, isithombe. Uphenyo HTC Desire 210 Dual Sim (Black)
Ingubo yama-70s: i-bohemian fashion esithombeni
Razer Game Ukulekelela: ukusebenzisa indlela; kulungiselelwa; ngobuhle nangobubi bawo